Lumay xiriirada casriga ah? Dhaco tirtiray xiriirada iyo macluumaad kale oo ka telefoonka? Ha ka welwelin! Waxaa jira badan oo software iyo codsiyada kaa caawin doonaa faahfaahinta xiriirada si deg deg ah gurmad iyo macluumaadka kale ee la kaydsan aad iPhone si sahlan loo isticmaalo. Technology ayaa na nolol sahlan laakiin waqti isku mid ah waxa aad u muhiim si ay u ilaaliyaan gurmad ah ee aad taleefan si joogto ah. Ka hor inta aadan soo dajiyo kasta oo casriyayn ee aad casriga ah, waxaad hubisaa in aad raad raac ah ee wax walba. Marna dhaawacdaa in loo diyaar garoobo ka hor, ka dib oo dhan waxay ku saabsan tahay macluumaadka qiimaha leh.
Bal aan wax ka ogaado xal kala duwan yihiin si aad u aaladaha Apple, Android iyo Blackberry oo kaa caawin kara in aad sameysato raad raac ah oo aad xiriirada iyo macluumaad kale oo telefoon hab fudud oo si sahlan.
2 NQ Xiriirada nidaameed
5 Waayo, iContacts
7 xal kale in xiriirada Blackberry gurmad
IntouchApp waa codsi weyn in uu yahay mid aad u fudud in ay isticmaalaan. Waa tababare fudud xiriir waa la jaan qaada dhufto ee kala duwan (qalabka macruufka, Android, Blackberry OS iyo Java). Waa super waxtar u leh dadka qalab kala duwan. InTouchApp riixo macluumaad waqtiga ka mid ka mid ah xiriirada aad dadka kale la siiyaa in ay aad u isticmaalaan app. Marka aad xaalkaa xiriir ah oo ku saabsan qalab aad, IntouchApp si toos ah syncs macluumaadka u qalab kale oo tani ay tahay sida feature weyn.
• la jaan dhufto ee kala duwan.
• u hagaagsan aan xuduud lahayn oo u dhexeeya qalabka kala duwan.
• khaladaad filayn sheegay at jeer.
NQ Xiriirada nidaameed waxay bixisaa xalal si ay u gudbiyaan, raad raac iyo soo celinta xiriirka la Jidka kaaftoomi-free ah. App waa la jaan qaada nidaamyada hawlgalka kala duwan sida macruufka, Android, BlackBerry iyo Nokia. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad sameysato akoon lacag la'aan ah la NQ si app ku kaydin kartaa xiriirada oo daruur ku NQ. Waxaad si fudud ka dibna maamuli kartaa xiriirada aad u qalab kale lala xiriirinayay daruurtii.
• dhufto ee Multiple- waafaqsan
• Maaraynta Online ee Xiriirada
• Taageerada kaliya version ugu dambeeyay ee macruufka.
Users aadka talinaynaa codsigan. Iyadoo codsigan, waxaad si fudud u edit karaa, maareeyaan iyo wadaagno xiriir ah oo ku saabsan xisaabtaada iPhone iyo Gmail. Waa mid ka mid ah software ugu dhamaystiran xiriir iyo maamulka kooxda ayaa diyaar u ah iPhone.
• socon oo keliya iPhone iyo Gmail.
Phoneswappr hadda taageertaa telefoonada macruufka, Android iyo Windows. Waa codsiga aamin ah inay geliyaan xiriirada si aad u daruurtii. Si aad u geliyaan xiriirada, PIN ah la siiyo, taas oo loo baahan yahay in decrypt xogta halka samaynta kala iibsiga ka mid ah xiriirada in qalab labaad. The xiriirada uploaded iyo PIN dhacayo intii toddoba maalmood ah ka dib, iyo xogta uu tirtiray ka server PhoneSwappr ah.
• hanaanka wareejinta Secure iyo ammaan
• Macluumaadka uu si toos ah u tirtiray Kabcada_ codsiga.
Tani app kala iibsiga, raad raac iyo soo celin marka aad la xiriirayso tuubada ka mid ah badhan. Xiriirada kaabta & Bedelka nuqul Pro liiska xiriirada oo idil galay xidhmo laamo ah si aad u soo diri kartaa adiga ama qof saaxiib ah inuu via e-mail. Cinwaanka waxaa lagu badbaadiyey qaab Vcard ah oo aad ku wareejin karaa ama dajiyaan xiriirada aad telefoonka, PC ama Mac mar walba oo aan ka kaaftoomi.
• kaabta Unlimited
• In-app xayeysiis yihiin jeedo a off si user ah.
Wondershare MobileTrans waa 1-Click codsiga gurmad Phone. Qalabkani waxa uu aad u ogolaanaysaa gurmad iyo dib u soo celineysa macluumaadka telefoonka effortlessly. Waxaad nuqul ka noqon kara xiriiryada, SMS, sawiro, muusig iyo ka badan oo ka qalabka Android, Symbian iyo macruufka in your computer. Waxa kale oo ay ku wareejinaya xiriirada, abuse wac, jadwalka taariikhda, fariimaha qoraalka ah, sawiro, music, video iyo barnaamijyadooda u dhexeeya iPhone, Android, Nokia (Symbian) telefoonada ka mid click fudud.
Step1: Ku rakib MobileTrans on your computer iyo ordi First, ordo halka macruufka aad, phone Android, ama Nokia ku xiran computer la cable USB.
Step2: On Menu Home ah, Ilaa ay doortaan Back ka Your Phone doorasho. Hubi xogta oo dhan aad rabtid in aad gurmad iyo riix Start Copy. MobileTrans Ayaa bilaabi doona in ay dib u up ka kooban loo doortay in ay kombiyuutarka. Waxaad markaas ku badbaadin karto xogta gurmad ah oo ku saabsan meesha aad joogto ah iyo ku celin qalabka kale mar kasta oo aad u baahan tahay.
Xalalka kale in xiriirada Blackberry gurmad
1. Maareeyaha Desktop BlackBerry 6.0
Tababare BlackBerry Desktop 6.0 for PC ka mid yahay dadka isticmaala Blackberry oo caan ah. Iyadoo tababaraha Desktop Blackberry, aad gurmad smartphone Berry madow xogta aad sida aad Xiriirada, Messages, Calendar, Settings Profile, iwm Hel faylasha aad anfacaya leh si guul leh u fidinno ID BlackBerry aad la BlackBerry App Adduunka.
• Nadiifi interface
• Arjiyada aan la xoojiyaa
2. Xiriirada kaabta
My Xiriirada kaabta waa codsi la yaab leh oo aad u ogolaanaya in ay gurmad, share iyo soo celiyo oo dhan xiriirada BlackBerry. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa si loo soo dajiyo codsigan qalabka blackberry aad ka dibna riix the'Backup 'button on. Qalabkani waxa uu markaas si toos ah badbaadin doonaa macluumaad la xiriir si aad kaadhka xusuusta / SD telefoonka. Tani waa habka ugu fudud ee gurmad iyo xiriirada aad dib u soo celisa oo dhan ka telefoonka aan u baahan computer ama .Wadashaqayntaas.
• Easy in ay isticmaalaan interface
• Mid ka mid ah click dib
Ka BlackBerry la PhoneMinor soo kabsado xogta shakhsiga ah si fudud. Waxaad soo kaban karto, Xiriirada, Messages SMS, Emails, Calendar, Photos, Videos iyo aad u badan iyo sidoo kale badbaadiyo xogta aad qaabab file caanka ah like.XLS, .CSV iyo .VCF (vCard). Qalab la awoodi karo oo si fudud qubka xogta aad ka hayaan telefoonka aad.
• goyn karo
• shilalka had iyo jeer.
> Resource > Top List > Top 6 Xiriirada Solutions kaabta aad Phone